[AKHRISO] Shan Arimood Oo Ay Muhiim Tahay In Ay Ogaadaan Ragu Oo Uu Leeyahay In Gadhka Lala Baxo Amaba Iyo Faa'iidooyin Waawayn Oo Ku Hoos Duugan
Wednesday, 12 September 2018 15:57
12/09/2018(BNN) Gadhku waxa uu ragga ka dhigaa kuwo soo jiidasho badan dhanka aragtida dumarka, daraasaad la sameeyay ayaa muujisay in timaha wejigu ay yihiin “astaamaha raganimo”, raggana ay ka ilaaliso cudurrada qaar.
Hadaba, waxaan idiin soo gudbineynaa 5 arrimood oo cilmi ah oo dhaca marka ay raggu gadhkooda siidaayaan:
1- Kansarka ayaa lagaga hortagaa
Gadhka waxaa suuraggal ah inuu ragga ka ilaaliiyo kansarka maqaarka, waxa uu jirka ka difaacaa shucaaca ultraviolet-ka ee khatarta badan 9%, waa sida lagu sheegay daraasad ka soo baxday jaamacadda Queensland, Australia.
2- Astaan raganimo
Daarasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ragga gadhka leh ay naftooda u arkaan in ay yihiin kuwo mas’uul ah, bulshadana maqaam sarre ayay kaga jiraan oo arrimo badan ayaa loo daba fariistaa.
3- Kuwo soo jiidasho badan
Daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ragga garka leh ay dumarka si aad ah u soo jiitaan, laakiin waa marka gabadha aabbeheed uu yahay mid gar leh oo qudha.
Garkaaga ka ilaali in uu noqdo mid wasakh badan
Dadka garka neceb waxay ku sheegaan in uu usgagga iyo wasakhda soo jiito, laakiin marka gadhka lagu dedaalo oo aan lagu ciyaarin si joogta ahna loo nadiifiyo, waxa uu ka qeybqaataa caafimaadka jidhka.
5- Xiirista garka oo cimridegdeg laga qaado
Daraasad la sameeyay ayaa daahrogtay in gadh xiirka aan nidaamsaneyn uu xiriir la leeyahay geeri xilli hore ah oo ay keeni karaan sababo ay ka mid yihiin, cudurada wadanaha iyo xididada dhiigga.
Xafiiska Wararka BoramaNews.com
More in this category: « DAAWO: Wasiirka Hawlaha Guud Ee Somaliland Oo Kulan La Qaatay Masuuliyiinta Gobolka Sanaag Iyo Waxyaabaha Uu Kala Hadlay Intii Uu Kulankaasi Socday DAAWO: Xukuumada Muuse Biixi Oo Si Wayn Loogu Canaantay Wax Ka Qabasho La'aanta Qabyaalada Xadhkaha Koosatay Ee Ka Jirta Deegaanada Somaliland »